ကားအကောင်းတွေ လာတော့မယ်.. လမ်းအကောင်းတွေ ဘယ်မှာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကားအကောင်းတွေ လာတော့မယ်.. လမ်းအကောင်းတွေ ဘယ်မှာလဲ
ကားအကောင်းတွေ လာတော့မယ်.. လမ်းအကောင်းတွေ ဘယ်မှာလဲ
Posted by ဦးကောက် on Oct 10, 2011 in Copy/Paste | 22 comments
ကုန်လမ်းညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မော်တော်ကားများအနက် ယာဉ်မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းအနှစ် ၂၀ ကျော်မှ အနှစ် ၄၀ ကျော်အထိ ရှိနေသော ကားဟောင်းများကို ပယ်ဖျက်ကာ ကားအဟောင်း အစားကားအသစ်များ အစားထိုး တင်သွင်းခွင့် ပြုတော့မည်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ ယာဉ်အပ်နှံမှုကို စတင်လက်ခံခဲ့ရာ မကြာမီ ကားအသစ်များ ၀င်ရောက် လာတော့မည် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ကားမော်ဒယ်အသစ်များ ၀င်ရောက်လာသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တွင်း လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေနှင့် မြို့တွင်းလမ်းများ အနေဖြင့် ဆိုးရွားစွာရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကားအကောင်းစားများနှင့် လမ်းအဆိုးများမှာ စီးရန်မသင့်တော်သေးကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မြို့တွင်းလမ်းများကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့နေ ပြည်သူများက ဆိုပါသည်။
ချိုင့်ခွက်များဖြစ်ပေါ်၍ ပျက်စီးနေသော ရန်ကုန်မြို့ လမ်းပိုင်းတစ်နေရာ
“အခုဆိုရင် သက်တမ်းရင့် ကားအိုကားဟောင်းတွေ နေရာမှာ ကားသစ်တွေနဲ့ အစားထိုးလဲ ပေးတော့မယ်။ ကားသစ်တွေပေးသွင်းတာ မြို့ပြ အင်္ဂါရပ်နဲ့ ညီညွတ်အောင် တင်သွင်းခွင့်ပေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကားသစ်တွေက ရောက်လာပြီဆိုတော့ လမ်းကောင်းဖြစ်ဖို့ပဲ လိုတော့တယ်။ ခုဆိုရင် နေရာတော်တော်များများမှာ ကားသစ်လေးတွေ မြင်နေရပြီ။ လမ်းကောင်းတွေ မြင်ရသွားရဖို့ပဲ လိုတော့တယ်။ ဒီနှစ်မိုးတွင်းဆိုရင် ရန်ကုန်မှာ ဘယ်နားသွားသွား ချိုင့်ခွက်ကြီးတွေနဲ့။ Down town လိုနေရာမျိုးမှာတောင် လမ်းတွေပျက်နေတာ။ ကျန်တဲ့နေရာတွေဆိုရင် ပြောမနေနဲ့တော့။ မြို့ထဲကနေ အောင်မင်္ဂလာသွားတဲ့ လမ်းဆို တော်တော်ဆိုးတယ်။ အဲဒီလို လမ်းမျိုး က မြို့တွင်းမဟုတ်ပေမယ့် လမ်းကတော့ ကောင်းသင့်တယ်။ အခုတော့ မြို့တွင်းကော မြို့ပြင်ပါ တော်တော် ဆိုးဆိုးရွားရွား ပျက်စီးနေတယ်။ ဒီတော့ကားအသစ်နဲ့ လမ်းပေါက်နဲ့ ကတော့ ကြည့်လို့ကောင်းနေပြီ။ ကား အိုနဲ့လမ်းစုတ်နဲ့ တုန်းကတော့ လိုက်နေတာပဲ။ အခုကားသစ်တွေ လာတော့မယ်။ ကားသစ်နဲ့ လမ်းသစ်ဖြစ်ဖို့လိုပြီ”ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ လမ်းများ ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးနေမှုကြောင့် ယခု နောက်ပိုင်းတွင် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ အနေဖြင့် ကားအောက်ပိုင်းပြင်ဆင်မှုများ ပိုမိုပြုလုပ်လာရကြောင်းလည်း ကားဝပ်ရှော့များထံမှ သိရသည်။
“အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကားအောက်ပိုင်း၊ တိုင်းလော့၊ ဘောဂျွိုင့်၊ ရှော့ဘားတွေ ခဏခဏလာပြင်ရတယ်။ အဓိကကတော့ လမ်းချိုင့်ထဲ ကို ကျပြီးဖြစ်တာ။ အရင်တုန်းကတော့ ကောင်းတဲ့လမ်းကို ရွေးမောင်း တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလမ်းတွေက ရှောင်မောင်းစရာ မရှိတော့ဘူး။ ပြည်လမ်း၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်းတို့လို အဓိက လမ်းမကြီးတွေမှာတောင်မှ မကောင်းတော့ဘူး။ လမ်းတွေကောင်းမယ်ဆိုရင် ကားပြင်ဆင်စရိတ်လည်း သက်သာလာမှာပါ။ ခုတော့ ဆင်ဖိုးထက်ချွန်းဖိုး ပိုကြီးနေဆိုသလိုကား ဈေးထက် ကားပြင်ဆင်စရိတ်က ပိုကြီးနေတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်”ဟု ကားဝပ်ရှော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြား ခဲ့သည်။
ယခုနှစ် မိုးရာသီတွင် ယာဉ်သွားယာဉ်လား များပြားသည့် လမ်းမကြီးများနှင့် လမ်းသွယ်များတွင် ချိုင့်ခွက်ကြီးများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းနှင့် လမ်းပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း ကြာရှည်ခံနိုင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် လမ်းများမှာ မိုးရွာသွန်းပြီးနောက်ပိုင်း ပြန်လည်ပျက်စီးခြင်းများနှင့် ပျက်စီးနေသော လမ်းချိုင့်ခွက်များကို ရှောင်၍ မောင်းနှင်ရခြင်းတို့ကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပိုမို ကြုံတွေ့လာရကြောင်းလည်း ရန်ကုန်မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့ပါသည်။
“မိုးတွင်းမို့ လမ်းမခင်းဘဲလမ်း ပြင်တဲ့အပိုင်းပဲ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခဏခဏ ပြန်ပျက်တယ်။ လမ်းကို ဖာတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေထွက်ပေါက်၊ ရေစီးပေါက်ကို မပြင်ဘူး။ ဒီတော့ မိုးရွာ၊ ရေ၀ပ်ပြီးပြန်ပျက်တာပေါ့။ လမ်း တံတား အင်ဂျင်နီယာတွေက ဒါကို သိပါတယ်။ ကျွမ်းလည်းကျွမ်းကျင် ပါတယ်။ စာရေးဆရာထက်ကျော်က ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာ ပြောဖူးတာကို သတိရမိတယ်။ အင်ဂျင်နီယာကြီးရဲ့ သား အင်ဂျင်နီယာလေးက သူတို့ မြို့ကို ပြန်တာဝန်ကျတော့ သူငယ်ငယ်ကတည်းက ပျက်နေတဲ့ လမ်းတွေခုထိ မကောင်းသေးတဲ့အကြောင်း အဖေ အင်ဂျင်နီယာကြီးကို ပြောတော့ အဲဒီလို ခဏခဏပြင်နေရလို့ မင်းအခုလို အင်ဂျင်နီယာကြီး ဖြစ်လာတာပေါ့လို့ ပြန်ပြောတယ်။ အခုလည်း အဲဒီလိုပဲလား လို့ တွေးမိတယ်။ အခုပွင့်လင်းရာသီမှာ လမ်းတွေ ဘယ်လောက်ကောင်း လာမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ”ဟု တာမွေမြို့နယ် တောင်မြင်းပြိုင်ကွင်း လမ်းတွင် နေထိုင်သူ လူငယ်တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
“အသုံးစရိတ်ကို တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရကခွင့်ပြုတဲ့ ပမာဏပဲသုံးရတယ်ဆိုရင်လည်း တကယ်လိုအပ် တဲ့ နေရာမှာပဲ သုံးစေချင်တယ်။ လူမသွားတဲ့ ပလက်ဖောင်းပြင်တာမျိုး၊ လမ်းပေါက် ကျောက်ချတာမျိုး မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ ရရှိတဲ့ ဘတ်ဂျက်ကို အမှန်တကယ် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် တော့ လမ်းတွေက ပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားပြီး ရန်ကုန်မြို့လည်း ကျက်သရေပိုရှိသွားမယ်”ဟု အငြိမ်းစား လမ်းတံတား အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးက ပြောပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ လမ်းများ နည်းတူ အဝေးပြေးလမ်းများတွင် လည်း လမ်းပျက်စီးနေမှုများကြောင့် အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းအချို့ ယာဉ်ထွက် ချိန်စောခြင်း၊ ယာဉ်ဝင်ချိန် နောက်ကျခြင်းများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ထို့ပြင် BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းတံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသော ကုမ္ပဏီ များအနေဖြင့်လည်း သက်ဆိုင်ရာ လမ်းပိုင်းအလိုက် လမ်းပျက်စီးမှုများ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ယာဉ်သွားယာဉ်လာ များပြားသော ပြည်လမ်း၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ မဟာဗန္ဓုလမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းနှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်းစသည့် လမ်းများရှိ လမ်းပေါက်များကို အမြန်ဆုံး ချက်ချင်းပြုပြင်ရန် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
“လမ်းဆိုတာနဲ့ ဘယ်လမ်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊အဝေးပြေးလမ်းရော မြို့တွင်း လမ်းတွေပါ လမ်းကောင်းတွေပဲ ဖြစ်သင့်တာပါ။ ကားတွေကတော့ ကားသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကားဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းကောင်းကိုပဲ မောင်းချင်ကြတာပါ။ ရန်ကုန်လိုမြို့မျိုးကျတော့ အများ ပြည်သူအများဆုံး အသုံးပြုနေတဲ့၊ ဘတ်စကားလိုင်းတွေ အများဆုံးပြေး ဆွဲနေတဲ့ main road တွေက ကောင်းကို ကောင်းသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီအဓိကလမ်းတွေကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ လမ်းတွေနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက လမ်းသွယ်အဆုံး၊ လမ်းအကုန်လုံး ကောင်းသင့်ပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားလိုင်းတွေ မှာဆိုရင်လည်း လမ်းကောင်းမှ အများပြည်သူ သွားရလာရတဲ့ အချိန်တိုတောင်းမယ်။ အချိန်ဆုံးရှုံးမှု နည်းလို့သွားချင်တဲ့နေရာ မြန်မြန် ဆန်ဆန်ရောက်မယ်။ လမ်းမကောင်းတော့ ရုံးသူရုံးသားတွေဆိုရင် ရုံးတက်ဖို့၊ ရုံးကိုရောက်ဖို့ကိုတောင် ဘတ်စကားပေါ်မှာ အချိန်အများကြီး ပေးနေရပါတယ်။ ဒီတော့သူတို့ရဲ့ အလုပ်ချိန်တွေ ဆုံးရှုံးတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ ကလည်း အများအားဖြင့် မြို့ပြင်မှာဆိုတော့ လမ်းတွေသာ ကောင်းမယ်ဆိုရင် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေရဲ့ trafficking hours တွေ လျော့ကျသွားမယ်။ ကျောင်းစာအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု ပိုကောင်းလာမယ်ပေါ့။ ဒီတော့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ စီးပွားရေး ဒီအရေးတွေ အားလုံးက လမ်းကောင်းတွေအပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်နေပါတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်း အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးကိုကိုကြီးက သုံးသပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ကယ့် လိုအပ်ချက်ပါပဲ၊ ကျုပ်တောင်( တစ်နေ့) ဆိုက္ကားစီးပြီးကားဂိတ်အထွက်၊ ကားလွတ် အောင် ဆို က္ကား က ဘေးထိုး ပြီးကပ်လိုက်တာ ချိုင့်ရှိနေတော့ မှောက်ကရော၊ ကံကောင်းလို့ ကား ဘီးအောက် မရောက်လိုက်တာ ၊ ဆိုက္ကားနင်တဲ့းသူဆိုဆိုက္ကားကသူ့ပေါ်ပိနေတာလေ၊ ကားတွေ – သတိကြီးကြပေလို့ပေါ့။
အဲဒါ လမ်းမကြီးပေါ်မှာနော်၊ မြောက်ဥက္ကလာလမ်းမကြီး တစ်လျှောက်၊ တာမွေ အခွန်လွတ် ဈေး ရှေ့က ကြက်ဂိတ်လမ်း၊မြောက်ဒဂုံ မဟာမြိုင်လမ်းမ ကြီး အို — အို ရေးရင်အများသား၊ —————–။
မိုးကုန်အောင်စောင့်နေတာပဲလား၊ ရွေးကောက် ပွဲ အောင်နိုင်ရေးမှာ ပဲ ဘတ်ဂျက် ကုန်သွားသလား၊
အစိုးအဖွဲ့သစ်မို့လို့ ဘတ်ဂျက်ပုံစံ ပြောင်းသလား မသိပေမည့်၊ ပြင်ကိုပြင်ရမှာ၊ ပြင်မှ ဖြစ်တော့မယ်၊ လမ်း
သွားပြည်သူတွေအတွက်ရော၊ (ကားတွေ၊အနှေးယာဉ်တွေပါ အပျက်စီးများပြီး ) အန္တရယ် ရှိပါကြောင်း၊
ဓာတ်ပုံထဲက လမ်းက နည်းနည်းလှနေပါသေးတယ်။အပြင်မှာ လမ်းလို့ ခေါ်ရက်စရာမရှိတဲ့ စုတ်ပြတ်သတ်လမ်းတွေက အပုံလိုက်ပါ။
၀ှီးတက်စ်အပါအ၀င်.. ကားနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အခွန်တွေ.. ၄-၅ဆတိုးကောက်ဖို့ လိုမယ်လို့..ပြောချင်တာပါပဲ.
အမြတ်များများများရဟန်ရှိတဲ့.. ဓါတ်ဆီကိုလည်း.. အခွန် မတရားကောက်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်..။
ဓါတ်ဆီဆိုင်မမြတ်ဘူးသူကြီးရဲ့ ND ပြန်အပ်လိုက်ပြီ…
တကယ်ပါ…စမ်းသပ်ကာလမှ..၀န်ထမ်းတော့ခဏလေးနြ့ ဖုံးတွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး….
သူ့ လူတွေ ဘဲပြန်ခန့် ရတာလေ
ပိုင်ရှင်တွေတော့..တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အခုဆိုရန်သူတွေ တောင်ဖြစ်လို့ 
သူတို့ တွေ ကိုကြပ်ကြပ်မတ်မတ်…ထိမ်းမရတာဆိုးနေတာ
လမ်းပျက်တာ..လမ်းပြင်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ ဘဲဆိုင်မယ်..။
၀ှီးတက်စ်အပါအ၀င်.. ကားနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အခွန်တွေ.. ၄-၅ဆတိုးကောက်ဖို့ တော့..တားပါစေ…….အစိုးရအကောက်ဆုံးကဒီအခွန်လေ…..
ဒီထက်သာတိုးရ၇င်ပြည်သူမွဲ ရချေရဲ့ …
ကိုယ့်က ဒီနိုင်ငံ လူလာဖြစ်နေတာ..ဆိုတော့..ကိုယ်ဘဲအပြစ်ရှိတယ်
အခွန်တွေကို အများကြီး နှင့် ကြပ်ကြပ် မတ်မတ် တိုးကောက်ရမှာပဲ
အခွန်ရှောင် တဲ့လူတွေကိုလဲ ကြပ်ကြပ် မတ်မတ် ထောင်ချရမှာပဲ
အခွန်မပေးချင် ရင်တော့ Democracy စံနစ်ကိုမသွားကြနှင့်
အစိုးရကို.. ထိုက်သင့်တဲ့အခွန်မပေးတာဟာ…. အောက်ကသီလကို ချိုးဖေါက်သလား… မချိုးဖေါက်ဖူးလား.. 8O
အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
အဒိန္နာဒါနာ= ပိုင်ရှင်မပေးသော သူတပါးဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းမှ။
ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ= ရှောင်ကြဉ်ရာ ရှောင်ကြဉ်ကြောင်း ဖြစ်သော သိက္ခာပုဒ်တော်မြတ်ကို။
သမာဒိယာမိ= ကောင်းစွာ ဆောက်တည်ပါ၏။
သူတပါးဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်း မှမဟုတ်တာ။
ကိုယ့် ဥစ္စာကို မပေးတာလေ။
ကိုယ့် ဥစ္စာကိုပေးသင့် မပေးသင့်က
၀ှီးတက်စ်အပါအ၀င်.. ကားနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အခွန်တွေ.. ၄-၅ဆတိုးကောက်သင့်တယ်
ဟိုးးးးးးးးးး အပေါ်က ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုကောက်မှာလား၊
အဲဒါတွေကြောင့် အခွန်ကောက်ခံရာမှာ မမှန်မကန် မမျှမတ မဖြစ်ဖို့နဲ့ လူတိုင်း သာတူညီမျှ အခွင့်အရေးရမယ်၊ ကိုယ်ပေးလိုက်ရတဲ့ အခွန်ငွေတွေကလည်း (ကိုယ်အပါအ၀င် လူထုအတွက်) အဟောသိကံ မဖြစ်ဘူး ဆိုရင်တော့ အခွန်ကို ပျော်ပျော်ကြီး ဆောင်လိုက်ချင်တာပါပဲ။
အခွန်များများကောက်ခံပြီး အိပ်ထဲကိုထည့် နေရင်ပိုဆိုးတော့မှာ၊ ကောက်ခံတဲ့ငွေတွေ လမ်းပေါ်
ကိုရောက်သွားရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ ။
လမ်းအပေါက်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် တ/ဥက္ကလာ နဲ့ ရွှေပြည်သာ လမ်းတွေက အဆိုးဆုံး
နံပါတ် တစ် လို့ထင်မိပါတယ်..။
လူကောင်းမှ လမ်းကောင်းပါမည် ဟု ထင်မြင်မိပါကြောင်း
အရင်က ရောင်းထား ကောက်ထား ခွင်ဖန်ထားတာတွေရဲ့ စာရင်းဇယား တွေကို အတိအကျ သိရလို့ကတော့လား….
နောက်နောင် တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် မှန်မှန်ကန်ကန် အခွန်ဆောင်ဖို့ကို လိုက်နာချင်ပါတယ်။ မမှန်မကန် မမျှမတသာ မဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ လူတိုင်း သာတူညီမျှ အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင် ပေးရတာ တန်ပါတယ်။
လမ်းအကောင်းစားတွေ နေပြည်တော်ဘက်မှာပေါ….။ လာကြည့်ပါလား..။ တစ်နေကုန်နေလို့ ကားတစ်စီးမှ ဖြတ်မသွားတာကြတာ တော့ဆိုးတယ်..။ ဒီလို ကွန်ကရစ်လမ်းတွေရှိမှန်း ကားသမားတွေ မသိတာလား … ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကားနဲ့ မတန်လို့ လာမမောင်းကြတာ လားတော့မသိဘူး…။ လမ်းတွေကတော့ တစ်ကယ်ကောင်း………. လှည်တွေ ဖြတ်မောင်းနေတာ နဲ့ ဘယ်နေ့ပျက်မလဲမသိဘူး..
သူကြီးမင်းက( အဒိန္နာဒါနာ– လို့ပြောတော့) ဟီး— ဟီး မြန်မာပြေမှာ လွတ်သူခပ်ရှားရှားနေမှာ – တစ်နှစ်တစ်နှစ်– အခွန်ဆောင်ဘို့ဘတ်ဂျက်ရာ သီရောက်ပြီဆိုရင်—- အခွန်မှုးတွေ တိုက်ခန်းဝယ်၊ ကားဝယ်ကြတာပါပဲ ၊ မ၀ယ်နိုင်တဲ့သူကတော့ ၊ကာရာအိုကေ စမောဇတ်လမ်းတို့၊ နှစ်လုံး သုံးလုံးတို့၊ ဘော သမားတို့ပဲ နေမှာ။စီးပွါးရေးသမားတွေကလည်းအဲလောက်ကလေးစုပေါင်းပေးရတာ ဘာမှတာဝန် မကြီး၊ဆိုတော့ တရားဝင်ပေးရမည့်ဟာနဲ့ဆို- အများ ကြီးသက်သာတော့၊ ရှည့်လည်းလျှောက်သာ၊ ပျားလည်း ဆွဲ သာ ပေါ့။
တစ်ခါနိုင်တော်စီမံကိန်းကြီးတွေမှာသူရဘို့/ငါရဘို့အပြိုင်လုကြရင်း၊အိမ်ရှေ့ပေါက်က၀င်၊ အိမ် နောက် ပေါက်က၀င် ပေးကြ၊ပူးကြနဲ့၊ အဲသည်မှာ ကန်ထရိုက်ရသွားတဲ့ သူက ပေးခဲ့ရသမျှကို လုပ်ငန်း ဘတ်ဂျက်ကပြန်နှိုက်၊ နောက်ဆုံးစီမံကိန်းချပေးသူနဲ့၊ စီမံကိန်းလုပ်ခွင့်ရသူတွေသာ စည်းစိမ်တွေတိုးလာ၊ ပြည်သူ့အတွက်လုပ်ပေးရတဲ့ ကိစ္စမှာတော့သတ်မှတ် ဘတ်ဂျက်က မလောက်တော့ပဲ၊ အပ်ချလောင်း ပြ လိုက်တော့၊ စီမံကိန်းအရ နှစ်ရေရှည် ခိုင်ခန့်ရမည့်အဆောက်အုံတွေ၊လမ်းတွေ၊ တံတားတွေ ဘယ်လာ ခိုင်ခံ့ပါတော့မလည်းဒါကြောင့်သည်စိတ်ဓါတ်တွေမပြုင်မချင်း၊ အဒိန္နဒါနာတွေ လုံးချာလိုက်လို့ကျုပ်တို့ မြန်မာရွာတစ်ရွာလုံးလောက်မြိုက် မဆုံး အောင်ရှိနေအုန်းမှာမို့ ko cho ပြောသလိုပါပဲခင်ဗျား။
ကိုင်း သည်တော့- လုငန်းရှင်တွေ၊ ပြည်သူတွေကလည်း မှန်မှန်ကန်ကန် အခွန်ထမ်း၊ အခွန်ဝန်ထမ်း များက လည်း မှန်မှန်ကန်ကန် ကောက်၊ ဘတ်ဂျက်သုံးပေးသူများကလည်းပြည်သူ အတွက် မှန်မှန်ကန် ကန်ပြန်ပြီးတာဝန်ထမ်းပေးတဲ့ ခေတ်ရောက်တော့မည်ဆိုပါလျှင်———။
” အခွန်ကို ပျော်ပျော်ကြီး ဆောင်လိုက်ချင်တာပါပဲ ”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခွန်သေချာ မကောက်သေးလို့နော်
တကယ်ကောက်ရင် ဝင်ငွေပေါ်မူတည်ပြီး ၄၀ % ထိကောက်လို့ရတယ်။
သင်္ဘောကပ္ပတိန်တွေကို အဲဒီနှုန်းနဲ့ ကောက်မယ်ဆိုပြီး သတင်းတစ်ခါထွက်လိုက်သေးတယ်။
အဲဒါနှင့် သင်္ဘောကပ္ပတိန်တွေ တော်တော်များများ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ခံလိုက်ကြတယ်။
သူငယ်ချင်း သင်္ဘောကပ္ပတိန် ၅၀ % လောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကို စွန့်လွှတ်လိုက်ကြတယ်။
တစ်လ US$ 7000 လောက်စီဝင်တဲ့ ပညာတတ်တွေ အများကြီး Free ရလိုက်တယ်လေ။
ရွာသားတို့ ဘယ်လိုထင်မြင်ကြလဲ ???
FR ကြီး မြန်မာဖောင့် ရိုက်တတ်သွားပြီလား…
(မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခွန်သေချာ မကောက်သေးလို့နော်
တကယ်ကောက်ရင် ဝင်ငွေပေါ်မူတည်ပြီး ၄၀ % ထိကောက်လို့ရတယ်။)
ဘယ်လို ၀င်ငွေရပေါက်ရလမ်းလဲဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ပေးဆောင်ရမယ့် အခွန်ရာခိုင်နှုန်းက ကွာခြားပါတယ်။ ဘိန်းတို့၊ အရက်၊ ဆေးလိပ်တို့ဆိုရင် (ရောင်းဝယ်ခွန်၊ ၀င်ငွေခွန်၊ အမြတ်ခွန် စသည်ဖြင့်) ၂၀၀% ထိလည်း အခွန်ကို ကောက်ခံနိုင်ပါတယ်။ လူ့အသုံးအဆောင်၊ မဖြစ်နေသုံးရတဲ့ စားသောက်ကုန်လိုမျိုး၊ ဆေးဝါးလိုမျိုးတွေဆိုရင်တော့ ကုန်ပစ္စည်းကို လိုက်ပြီး ၁၀% မှစ၍ သင့်တော်တဲ့ ရာခိုင်နှုံး သတ်မှတ်ပြီး ကောက်ခံတဲ့ စည်းမျဉ်းရှိတယ်လို့ ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနက အရာရှိတစ်ဦးရဲ့ ဟောပြောပွဲမှာ နားထောင်ဖူးပါတယ်။ အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းက မမြတ်ရင် (အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အရှုံးပေါ်နေရင်) မကောက်ဘူးလို့လည်း ပြောသွားပါသေးတယ်။
နောက်ဆုံး အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုက သတ်မှတ်ပေးဆောင်ခိုင်းတဲ့အခွန်ဟာ အခွန်ထမ်းပြည်သူကို ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်စေရပါဘူးတဲ့။
လစာ/၀င်ငွေ ရဲ့ ၄၀ % အခွန် ဆောင်ရမှာကို ပြောတာပါ။
မ မ ရေ ကိုရင်ဖောက လူဝတ်လဲတာကြာပြီ တရုက်ဗမာ အရေးအခင်း ပြီးကထဲက (just only kidding)
Yes, Ko Cho ( since တရုက်ဗမာ အရေးအခင်း ပြီးကထဲက )
During this တရုက်ဗမာ အရေးအခင်း,
I gotagreat web page from “Myittha”.
Now, I am using this web page to type Myanmar font.
wonderful,dear fri ကိုရင်ဖော ရေကျနော်လဲ ဒီနည်း နဲ့ပဲအားပေးနေရတာ မြန်မာပြည်သည် တို့ပြည် မြန်မာစကားသည်တို့စကား မြန်မာမလေးများသည် ငါတို့အမျိုး